Home News RW hore Omar Cabdirahiid ayaa dib cadeeyay mowqifkiisa ku aadan Qabi Dhagax
RW hore Omar Cabdirahiid ayaa dib cadeeyay mowqifkiisa ku aadan Qabi Dhagax
Ra’isal Wasarihii hore Mudane Cumar Cabdirashid ayaa maanta dib u cadeeyay mowqofkiisa ku wajahan go’aankii golaha wasiiraada iyo masaafurinta Korneel Cabdikarim Shiikh Muse (Qalbi Dhagax).
Cumar Cabdirshid oo la soo xiriray Maanta Muqadishu Online ayaa inoo sheegay in uu ka soo horjeedo mowqifka dowladda qaadatay isla markaana qalad ahayd in la la musaafuriyo Qalbi Dhagax.
Waxa uu yiri “Ma aha wax sharciga waafaqsan, dhaqan aan u ahayn ummadda soomaliyeed, in muwaadin Soomaaliya xuquuqdiisa lagu tunto” RW hore Waxa uu ku daray ” waxa ay ila tahay in go’aankaas lagu degdegay, isla markaana uu waddo xun u furayo ummadda Soomaaliyeed”
Mar aan waydiinay isaga oo ah Senator in uu kala hadlay Xildhibanada kale qadiyaan Waxa uu inoo sheegay in uu si jooogto ah ula xiriiro xildhibanadda, waxaana rajaynayaa in ay dhawaan go’aan ka qaadan doonaan. Ayuu ku soo kooban hadalkiisa
Howlwadeenno ka tirsan xafiiska RW Kheyre ayaa Muqdisho Online u sheegay maalmo ka hor in RW CCC uu taageersan yahay go’aanka golaha wasiirada sida aan halkan idiinku soo gudbinay.
Previous articleSharif Xassan oo sheegay in ay adag tahay in RW Xassan Kheyre la badbaadiyo
Next articleSomalia violated domestic and international law in extraditing Qalbi Dhagah-legal expert
Ciidamo Hubeysan Oo Weerar Ku Qaaday Taliska Booliska Gobolka Nugaal
DFS oo Hoteelada Muqdisho ku xaraynaysa Xubno Baarlamaan oo Galmudug ay...